Député Nicolas Randrianasolo: Mila mahay maka lesona ny mpitondra
jeudi, 22 octobre 2020 13:10
Nivahina tao amin'ny fandaharana rahavavy "L'invité du jour" Real Tv nentanin'i Gascar Fenosoa, ny Solombavam-bahoaka voafidy tao Betroka, Jean Nicolas Randrianasolo, ny alarobia 21 oktobra.
Nambarany tamin'izany fa fanasoketana avokoa ny filazana azy ho mpiaro ny dahalo, efa indroa aho hoy izy no lany tao Betroka ary manana ny toerany any an-toerana sy eo anivon'ny iraisam-pirenena.
Naverimberiny fa hifandimbiasana io fitondrana io ka tsy azo hizahozahoana, ary niantso ny Filoham-pirenena ankehitriny izy ny hanao famelana faobe hisian'ny fitoniana ialana amin'ny valifaty mifadimby sy mety manaranaka mihitsy, satria dia hisy fiantraikany any amin'ireo taranaka ny fifanagadrana ataon'ny Ray aman-dreny.
Nanambara izy fa ny Silamo dia manana fitaizana hizara, ka izay manana manome ny tsy manana, ary hifanampian'ny samy mpino ny manangana toeram-pivavahana na Mosquée, ka tsy atao mahagaga hoy hatrany ity Solombavam-bahoaka ity raha hanangana Mosquée 2 000 isa, na iray isaky ny Kaominina ny Silamo Malagasy. Vola madio izany hoy hatrany izy fa tsy misy vola maloto izany.
Namarana ny fandaharana moa ny Député Jean Nicolas Randrianasolo tamin'ny hoe "moto novidian'ny Filoha teo aloha Hery Rajaonarimampianina ho an'ny Ben'ny tanàna rehetra manerana ny Nosy ihany no nampiasain'izy ireo nentina nanaovana fampihelezan-kevitra ho an'ny Kandida Andry Rajoelina, izay lany Filoham-pirenena".